Highlights from the Media Literacy Debate - DVB Multimedia Group
Highlights from the Media Literacy Debate
by DVBDadmin · Published September 20, 2014 · Updated September 22, 2014
20/09/2014 Best quotes of the Media Literacy Debate:
“ကျနော်တို့လွှတ်တော်သတင်းတွေတောင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သတင်းအမှောင်ချတာခံနေရတာ။ ဒီတော့ သတင်းတိုင်းကို ချက်ချင်းမယုံပါနဲ့။ အချိန်ယူပြီး သေချာသုံးသပ်ပြီးမှ ယုံကြပါ။”
ဦးခိုင်မောင်ရည် – ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
“Even our parliament news are blacked out by the MOI(Ministry of Information).Thus, please don’t believe every single news at once. Take time for considering them then trust them.”
U Khaing Maung Yee (MP)
“ကျမတို့ဆီမှာ စာဖတ်ပရိသတ်က အားအနည်းဆုံးမဏ္ဍိုင်ပဲ. သတင်းအမှောင်ခေတ်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတော့ စာဖတ်အားတွေနည်းကုန်တယ်..လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာကို သတင်းအေဂျင်စီတခုအနေနဲ့ မမြင်စေချင်ဘူး။ ဒီသတင်းတပုဒ်..ဘယ်အရင်းအမြစ်ကလာလဲ.. ဖြစ်နိုင်ရဲ့လား? သတင်းမှာ ဘယ်ပညာရှင်တွေက ဘယ်လိုသုံးသပ်ထားတာလဲ ဒါတွေချင့်ချိန်ပြီးမှ ယုံစေချင်တယ်။”
မသီတာစမ်းချောင်း – တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ(ပဲ့တင်သံဂျာနယ်)
“The most weakness pillar in our country is the readers. As they passed the dark ages of the news, their reading habits were weaken. I want to suggest people, not to think the social media asanews agency. Where this news comes and is itareliable one?. And how the field experts give comments on that news, based on these criteria, people need to trust the news.”
MaThida (Sanchaung)- Editor (The Echo Journal)
“အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနတွေကနေ သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေ ထုတ်ပေးဖို့လည်း လိုတယ်။ ဥပမာ ရဲဇာနည်ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာကနေ မှုခင်းသတင်းတွေ ဒီသတင်းကတော့ မှန်တယ်၊ ဘယ်သတင်းကတော့ ကောလာဟလဖြစ်တယ်ဆိုတာ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပေးတော့ ပရိသတ်က အမှန်သိရတယ်။ သတင်းအမှန်တွေ ထုတ်ပေးနိုင်ရင် လူထုက ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့အလေ့အထ ပိုရှိသွားမယ်။”
ဦးဇော်ဇော်မျိုးလွင် – အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ (Yangon Heartz Media and Business Solution)
“The Government Ministries should give the right information. For example, YE ZAR NI facebook , the official facebook of the Myanmar Police Agency, describes the crimes news which are true and up to date. And they described which news are rumors so people know the truth. If we can distribute the right news, then people will have the media literacy over the news that they got”
U Zaw Zaw Myo Lwin (Executive Director – YHMBS )
“နှစ်ပေါင်းများစွာ အစိုးရပိုင် ၀ါဒဖြန့်သတင်းစာတွေပဲ ဖတ်ခဲ့ရတော့ ပရိသတ်က ချင့်ချိန်စဉ်းစားနိုင်စွမ်း အားနည်းသွားတာ။ ပရိသတ် ချင့်ချိန်တတ်အောင် သတင်းရင်းမြစ်များများချပြပေးကြဖို့လိုတယ်. ဒီဂျာနယ်မှာ ဒီလိုရေးရင် နောက်တစောင်နဲ့ သတင်းမှန် မမှန်ဆိုတာ တိုက်ကြည့်.. sourceများများနဲ့ ပရိသတ်ကို ထိတွေ့ပေးမှ ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့ အလေ့အထပိုများလာမှာ။”
ဦးသောင်းစုငြိမ်း – အယ်ဒီတာချုပ်(7Day Journal/Daily)
“People had read the government owned propaganda news for ages. So their analytical skills were weaken. We need to show many news sources to our public in order to increase their analytical skills. If one journal wrote like this then check that news in other journal whether it’s true or not. The more exposure to different sources , the more media literacy that our people will get.”
U Thaung Su Nyein- Chief Editor (7 Days Daily)
“စာပေစိစစ်ရေးရဲ့ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှု နှစ် ၅၀ ကာလဖြတ်သန်းပြီးချိန်မှာ အယ်ဒီတာတွေရဲ့ တည်းဖြတ်စားပွဲခုံက လျစ်လျူရှုခံခဲ့ရတယ်။ တည်းဖြတ်စွမ်းရည်တွေ ကျဆင်းသွားတယ်။ ဒါကြောင့် မီဒီယာအပေါ်မှာဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်မှုစွမ်းရည်က သတင်းသမားတွေကိုယ်တိုင်ကို ရှိဖို့လိုနေတာ။”
“After passing the censorship of the board of censorship for 50 years, the editors’ desk was neglected. Editorial qualities were degraded. So, the media literacy is strongly needed by the reporters themselves.”
Download all the quotes, also in Burmese, on PDF here: dvbdebate.net/press.
Next story About the next debate
Previous story Press Kit: Media Literacy